တိုးမြှင့် Impulsivity ကိုကာကိုင်းရှာဖွေခြင်း၏ Dorsolateral Striatal Dopamine ထိန်းချုပ်မှု (2014) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိသင့် ဦး နှောက်သို့အကူးအပြောင်းနှောင့်နှေး
တိုးမြှင့် Impulse (2014) ရှာကင်း၏ Dorsolateral Striatal Dopamine ထိန်းချုပ်ရေးဖို့ေူပာင်းလဲရေး Retards
ဟားဗတ် Volume ကို 76, Issue 1, စာမျက်နှာ 15-22, ဇူလိုင်လ 1, 2014
barry ဂျေ Everitt
Received: မေလ 21, 2013; ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော form မှာရရှိထားသည့်: စက်တင်ဘာလ 18, 2013; လက်ခံခဲ့သည်: စက်တင်ဘာလ 18, 2013; အွန်လိုင်း Published: အောက်တိုဘာလ 23, 2013
ကင်းရှာအံ့သောငှါကျော် DLS Dopamine ထိန်းချုပ်ရေး၏န်ထမ်းခေါ်ယူမှု
Impulse ကင်းရှာအံ့သောငှါကျော် DLS Dopamine ထိန်းချုပ်ရေးဖို့နှောင့်နှေးေူပာင်းလဲရေးနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
maladaptive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအလေ့အထများ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအပြုအမူကျော် dopaminergic ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ventral-to-dorsal striatal ပြောင်းကုန်ပြီနှင့် တွဲဖက်. ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်လက်အဖြစ်ဤအလေ့အကငျြ့အလွယ်တကူဖွံ့ဖြိုးပေမယ့်, မြင့်သော Impulse မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သို့သော် Impulse dorsolateral striatum ဖို့အကူးအပြောင်း (DLS) dopamine-မှီခိုကင်း-ရှာကြံအလေ့အထများနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သို့မဟုတ် Impulse နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် intrastriatal ဆိုင်းထို့အပြင်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူးရှိမရှိ။
ငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန် task ထဲမှာဖော်ထုတ် High- နှင့်အနိမ့်ထကြွလွယ်သောကြွက်တာဟာတစ် cue-အလင်းအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်ပျက်နှင့်အတူ Self-စီမံခန့်ခွဲကိုကင်း (.25 မီလီဂရမ် / ပြုတ်ရည်) ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ 0-မိကိုကင်း-ရှာစဉ်အတွင်းα-flupenthixol (5, 10, 15, ဒါမှမဟုတ် 15 μg / ခြမ်း) ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် intracranial တာဟာအသုံးပြုပုံအစောပိုင်း, အကူးအပြောင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်-ဇာတ်စင်: Dopamine ဂီယာသင်တန်းသုံးခုအဆင့်ဆင့်ပြီးနောက် DLS အတွက်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည် တစ်ခုချင်းစီကိုတုန့်ပြန်နေတဲ့ကိုကင်း-ဆက်စပ်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်မှုအားဖြင့်အားဖြည့်ခဲ့သည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုအစည်းအဝေးများ။
အစောပိုင်းအဆင့်စမ်းသပ်မှုများတွင်မအုပျစု DLS dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ High-ထကြွလွယ်သောကြွက်နေဆဲα-flupenthixol တာဟာအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြသော်လည်းအကူးအပြောင်းအဆင့်စမ်းသပ်မှုများတွင်နိမ့်ထကြွလွယ်သောကြွက်, ကိုကင်းရှာအတွင်းသိသိသာသာထိုး-မှီခိုလျှော့ချရေးပြခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုရှာကြံနောက်ဆုံးနှောင်းပိုင်း-ဇာတ်စင်မှာတော့နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှထိုး-မှီခို sensitivity ကိုပြသခဲ့သည်။
ရလဒ်မြင့်မားသော Impulse ကိုကင်းရှာကျော် DLS-dopamine-မှီခိုထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုနှောင့်နှေးအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤသည် Impulse စွဲတစ်ခုတိုးလာ propensity ပေးအပ်လျှင်, ရိုးရှင်းစွာအလေ့အကျင့်များပိုမိုလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတဆင့်ပေမယ့်အစား maladaptive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအလေ့အထအတွက်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်း corticostriatal နှင့် striato-striatal ဖြစ်စဉ်များအပြန်အလှန်မှတဆင့်မဟုတ်ပါ, ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ကိုကင်း, dopamine, မူးယစ်ဆေးစွဲ, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြား, လေ့, striatum
တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထားနောက်ဆုံးမှာ maladaptive မူးယစ်ဆေးထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းဘာသာရပ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသော neurobiological အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်များ၏ဆုံထဲကနေစွဲရလဒ်များကို, (ရှာကြံကြောင်းအကြံပြု1, 2, 3) ။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိုငွေပြမှုနှင့်အမူအကျင့်တရားရှိဖို့အတွက်ရရှိလာတဲ့, အလုပ်အမှုဆောင်ဖြစ်စဉ်များချို့ယွင်းမသာ (ထိတွေ့မှု4), ဒါပေမယ့်လည်း (မူးယစ်ရှာကြံအလေ့အထများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်3, 5, 6), အားဖြင့်မိမိတို့၏ချက်ချင်းအကျိုးဆက်များနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ကြောင်းဆာပလုပ်ရပ်များ rendering (6, 7) ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများ (ပိုင်းတွင် striatum နှင့် prefrontal cortex ၏ ventral limbic ဒေသများကန့်သတ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာပို dorsolateral, အသင်းအဖွဲ့များနှင့်သိမြင်မှုပတ်ဝိုင်းဖြစ်ကြောင်းဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျှော့ချခြင်းနှင့် D2 dopamine receptors အပါအဝင်, corticostriatal circuitry အတွင်းကဤအဆောက်အဦများ၏နယ်မြေအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဖြစ်ပေါ်8, 9, 10) ။ စွဲလမ်း၏သင်တန်းကျော်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသိမြင် corticostriatal ကွန်ယက် limbic မှဤတိုးတက်သောပြောင်းကုန်ပြီ (11) (မူးယစ်ဆေးရှာထိန်းချုပ်၏ locus အတွက် dorsolateral striatum (DLS) ဖို့နျူကလိယ accumbens ကနေအကူးအပြောင်းနှင့်အတူရာအရပ်ကိုကြာနှင့်တာ12) နှင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal နှင့် striato-striatal အလုပ်လုပ်တဲ့နားချင်းဆက်မှီ (ထဲတွင်ဆက်စပ်မညီမမျှ13) ဟောင်းတဦးနှင့်လက်ရှိစွဲတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ပြသ။
တိရစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာစရာများကိုနောက်ထပ်ဒီ ventral မူးယစ်ဆေးရှာကြံကျော်ထိန်းချုပ်ပြောင်းကုန်ပြီ DLS မှသရုပ်ပြခဲ့ကြ (14, 15တန်ဖိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်) (မူးယစ်ဆေးများအတွက်တုံ့ပြန်လေ့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သာ3, 6) ဒါပေမယ့်လည်း (ရှာကြံ compulsive ကိုကင်းများပေါ်ပေါက်ရေးထင်ဟပ်16) ။ အဆုံးစွန်သော, စွဲလမ်းတဲ့အမာခံများအင်္ဂါရပ် (17), (မြင့်သော Impulse ၏အမူအကျင့်ဗီဇအားဖြင့်ခန့်မှန်းနေသည်18), အ ventral striatum အတွက်အနိမ့် D2 /3dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော (19) ။ ဤသည် Impulse နှင့်အလေ့အထများ, သူတို့ရဲ့ striatal dopaminergic အလွှာနှင့်အတူ, ကိုကင်းစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းအပြန်အလှန်ကြောင်းအကြံပြုယူဆချက်မှဦးဆောင်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအပြန်အလှန်၏ neurobiological အခြေခံမသိနိုင်ပါဘူး။ Neurocomputational သင်ယူမှုသီအိုရီ-based, Basal ganglia function ကို၏သရုပ်ဆောင်-ဝေဖန်မော်ဒယ်များ (20) မြင့်မားတဲ့ Impulse နှင့် ventral striatum အတွက်၎င်း၏ဆက်စပ်အနိမ့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးထိန်းချုပ် DLS ဖို့အကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့နှငျ့အခွားသူစွဲလမ်းအတွက်ရှာကြံ compulsive မူးယစ်ဆေးအစားအစားလွတ်လပ်စွာထူထောင်မူးယစ်ဆေးဝါး-သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, maladaptive မက်လုံးပေးအလေ့အထ (ကျော်အားနည်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့ကြ4, 21).
ထိုကြောင့်ငါတို့သည်တိုက်ရိုက်မြင့်မားတဲ့ Impulse ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွင်းကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကျော် dopamine-မှီခို DLS ထိန်းချုပ်မှုများစုဆောင်းမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ငါတို့တာဝန် (5-CSRTT အဆိုပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်မြင့်မား (HI) နှင့် (LI) အနိမ့်ထကြွလွယ်သောအဖြစ်ဖော်ထုတ်ကြွက်များ၏ DLS သို့ dopamine အဲဒီ receptor ရန်α-flupenthixol ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ), အစောပိုင်းမှာ cue-controlled ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူပေါ်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာနှင့်ကိုကင်းများအတွက်အားဖြည့်တဲ့ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားအောက်တွင်သင်တန်းနှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့် (22) ။ ဤအခြေအနေများအောက်၌ကျွန်တော်အရင်က (ကိုကင်းရှာသည့် DLS အတွက် dopamine ဂီယာအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်လာကြောင်းပြသကြ14, 18, 23), ဤ dopaminergic ယန္တရား၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်စုဆောင်းမှု (မူးယစ်ရှာကြံအလေ့အထများပေါ်ပေါက်ရေးတစ် neurobiological အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်3, 6).
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆိုက်ရောက်အပေါ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 300 ဂရမ်အလေးချိန်လေးဆယ်အထီး Lister hood ကိုကြွက် (ချားလ်စ်မြစ် Laboratories, Kent, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) (သျောခဲ့ကြသည်23) ။ စမ်းသပ်ချက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း 1986 တိရစ္ဆာန်များ (သိပ္ပံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ) အက်ဥပဒေနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ယန္တရားနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ အဆိုပါ 5-CSRTT ယန္တရား (တခြားနေရာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး24, 25()1 ဖြည့်စွက်) ။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (ယခင်ကဖော်ပြထားကြောင်းမှတူညီခဲ့သည်18) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းအိမ်တအိမ်အလင်းနှင့်မဂ္ဂဇင်းအတွက်အစားအစာတောင့်များ၏ပို့ဆောင်မှုအားဖြင့်အော်ပရေတာခနျး illumination နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ မဂ္ဂဇင်း panel ကိုဖွင့်လှစ်တွန်းနှင့်ဤတောင့်စုဆောင်းပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်စတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး fixed intertrial ကြားကာလ (ITI) ပြီးနောက်, တုံ့ပြန်မှုခါ aperture တစျဦး၏နောက်ဘက်တစ်ဦးအလင်းခေတ္တ illuminated ခဲ့သည်။ ကန့်သတ်-ကိုင်ကာလ (5 စက္ကန့်) အတွင်းမှာဒီကို aperture အတွက်တုံ့ပြန်ချက်မဂ္ဂဇင်း (မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု) တွင်တစ်ဦးအစားအစာတောင့်များ၏ပို့ဆောင်မှုအားဖြင့်အားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦး nonilluminated ကို aperture အတွက်တုံ့ပြန်ချက်မမှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်နှင့် 5-စက္ကအချိန်ထွက်ကာလအားဖြင့်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ ကန့်သတ်-ကိုင်ကာလအတွင်းတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်တစ်ခုပျက်ကွက်အဖြစ်ရေတွက်ခြင်းနှင့်ထိုနည်းတူအပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ အစားအစာစုဆောင်းခြင်းမပြုမီဆိုကို aperture အတွက်အပိုဆောင်းတုံ့ပြန်မှု (တုံ့ပြန်မှု perseverative) မှတ်တမ်းတင်ထားသောပေမယ့်အပြစ်ပေးမခံခဲ့ရပါ။ ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းမပြုမီဆိုကို aperture အတွက်လုပ်တုံ့ပြန်ချက်, ဒါမှမဟုတ်အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု 5-စက္ကအချိန်ထွက်ကာလအားဖြင့်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ သင်တန်းကိုဖြတ်ပြီး, အ ITI (တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်, ထိုလှုံ့ဆော်မှုကြာချိန်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားခဲ့သည်25) ။ ဘာသာရပ်များသည်တိကျမှန်ကန်မှု> ၇၅% နှင့်ပျက်ကွက်မှုသည် ၂၀% ထက်နည်းသောအချိန်တွင် ၅ စက္ကန့် ITI ဖြင့် ၀.၅ စက္ကန့်ရှိချိန်တွင်ဘာသာရပ်များသည်လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုယူထားကြသည်။
တုံ့ပြန်တည်ငြိမ်၏2ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ကြွက် ITI (ရှည်လျားသော intertrial ကြားကာလ [LITI]) သုံး 60-မိစိန်ခေါ်မှု 7-စက္ကခံယူအစည်းအဝေးများ, အခြေခံ 5-စက္က ITI အစည်းအဝေးများ (နေဖြင့်ကွဲကွာ18, 26) ။ အဆိုပါ LITIs သိသိသာသာအားဖြင့် Impulse အတွက် interindividual ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ, တုံ့ပြန်အချိန်မတန်တိုးပွားစေ။ LITI အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုအရေအတွက် (ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညွှန်းကိန်းကိုထောက်ပံ့ပေး18, 19, 24, 25, 26), HI သို့မဟုတ် LI ကြွက်များကိုဖေါ်ထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဘာသာရပ်များ (ကနောက်ဆုံးနှစ်ခု LITI အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုများယုတ်အရေအတွက်အတိုင်းအဆင့်ခဲ့ကြသည်10, 18) ။ <၂၀ သို့မဟုတ်> ၅၀ မတိုင်မီအချိန်အထိတုံ့ပြန်မှုရှိသူများကိုမူ LI နှင့် HI ကြွက်များအဖြစ်အသီးသီးရွေးချယ်ခဲ့သည် (n = 8 / အုပ်စုသည်) (ပုံ S1 in 1 ဖြည့်စွက်).
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှု, မဂ္ဂဇင်း panel ကိုတွန်း, မှန်ကန်သောနှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှု, ချန်လှပ်စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်စုဆောင်းခြင်းအောင်းနေချိန် (မီလီစက္ကန်အစားအစာတောင့်စုဆောင်းရန်) LI အတွက်အခြေခံအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ဖို့နောက်ဆုံးနှစ်ခု LITI အစည်းအဝေးများတစ်ခုချင်းစီရှေ့အဆိုပါအခြေခံအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခဲ့ကြသည် နှင့် HI ကြွက်များ
ကြွက်ထို့နောက် (ယေဘုယျမေ့ဆေးအောက်မှာစံသွေးကြောသွင်းခြင်းနှင့် intrastriatal ခွဲစိတ်1 ဖြည့်စွက်) ။ Cannulae အဆိုပါ dorsolateral striatum (anterior / posterior + 2, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် / medial ± 1.2, dorsal / ventral-3 [အထက်မြန်မာနိုင်ငံသ3မီလီမီတာကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ15]; အေပီသတင်းဌာနနှင့် ML bregma ကနေတိုင်းတာကိုသြဒိနိတ်, DV [ဦးခေါင်းခွံမျက်နှာပြင်, -3.3 မီလီမီတာမှာ incisor bar ထဲကနေကိုသြဒိနိတ်27]) ။
ကိုကင်း Hydrochloride (Macfarlan-Smith က Edinburgh, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) မြုံ .9% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ α-Flupenthixol (Sigma Aldrich, ရေကူးကန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ကို double-ရေစက်ရေအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ မူးယစ်ဆေးဆေးများဆားဖောင်ပုံစံတွင်အစီရင်ခံရသည်။
ယန္တရား။ တခြားနေရာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတကျိပ်နှစ်ပါးစံ operating အေးစက်အခန်းများ (15) (နည်းလမ်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် 1 ဖြည့်စွက်).
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများများ၏အချိန်ဇယားမှာပြသ ပုံ 1။ အတိုချုပ်, ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်7ရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည်။ ကိုကင်း (.25 မီလီဂရမ် / ပြုတ်ရည်; .1 mL /5စက္ကန့်) တဦးတည်းတက်ကြွလီဗာစာနယ်ဇင်းတစ်ခုပြုတ်ရည်ထဲမှာရလဒ်နှင့် 1-စက္ကအချိန်ကုန်အစပျိုးသောအားဖြည့်တစ်ဦး fixed-အချိုး 1 (FR20) (စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်) အချိန်ဇယားအောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ခဲ့သည် ။ တက်ကြွစွာလီဗာအထက် cue-အလင်း (အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု [CS]) illuminated ခဲ့ 20 စက္ကစဉ်အတွင်း, အိမ်အလင်းငွိမျးခဲ့ပါတယ်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီပြန်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားလီဗာပေါ်နှိပ်ယေဘုယျလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအညွှန်းကိန်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ Programs အကျိုးဆက်ခဲ့ရတယ်။ 30 ကင်းတာဟာအများဆုံးဤအဆင့်မှာမရရှိနိုင်ခဲ့။ တက်ကြွလှုပ်ရှားလီဗာတာဝန်ကျရာ counterbalanced ခဲ့သည်။
Self-အုပ်ချုပ်ရေးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များ၏အချိန်ဇယား။ ဘာသာရပ်များအမူအကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းအစမပြုမီသွေးကြောသွင်းပြွန်နှင့်ဗဟို cannulae ခွဲစိတ်တစ်ပါတ်ခံယူ။ အစောပိုင်း-ဝယ်ယူစမ်းသပ်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် fixed-အချိုး 1 (FR1) သင်တန်းကိုငါးအစည်းအဝေးများရှိခဲ့သည်။ နေ့ရက်များ 13 မှစ. 17 ငှါ, တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက် FR10 (: S ကို FR4) ၏ Mid-ဇာတ်စင်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယားကိုမှအစည်းအဝေးများတစ်လွှားတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ကြွက်နှစ်လယ်ပိုင်းဇာတ်စင်စမ်းသပ်ခြင်းမဝင်ခင်ငါးအစည်းအဝေးများသည်အချိန်ဇယားအပေါ်နျြရစျ။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်ထပ်မံဗိုလ်လုပွဲဒုတိယယူမှုကိုလေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယား, FI30 (: S ကို FR31) မှနေ့ရက်များ 15 နှင့် 10 အပေါ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကြွက်များကိုထပ်အားဖြည့်များ၏နောက်ဆုံးအချိန်ဇယားအပေါ် 15 မှနေ့ရက်များ 32 ထံမှ 46 လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများအပြီးတွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်-ဇာတ်စင်စမ်းသပ်ခြင်းနေ့ 37 အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ ဃ, နေ့, FI, fixed-ကြားကာလ။
အားဖြည့်များ၏ FR1 အချိန်ဇယားအောက်တွင်ငါးသင်တန်းပြီးနောက်ရှာကြံအစောပိုင်းအဆင့်ကိုကင်းအပေါ် striatal dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆေးထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ α-flupenthixol ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာ DLS သို့လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား 15-မိစမ်းသပ်မှုအစည်းအဝေးများ [FI15 (FR10: S က)] တိုင်းတက်ကြွစွာလီဗာစာနယ်ဇင်းတစ်ဦး 1-စက္ကအလင်း CS တင်ဆက်မှုအတွက်ရလဒ်နှင့်ကိုကင်းမှသာ 15-မိပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးလီဗာစာနယ်ဇင်းအပေါ်ကိုအပ်ခဲ့ကွောငျးအတွက်အရေးပေါ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုထူထောင် ကြားကာလ (23) ။ သူတို့အတိအလင်းထိုအမှုသည်ချိန်းကြားကာလထက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးအတွင်းရှာကြံကင်းဘို့အကဲဖြတ်ကြောင့်, အရှင်အစောပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုမပြုမီကောက်ယူခဲ့ကြခြင်းနှင့်, အရှင်သည်ဤအစည်းအဝေးများအပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများကထိခိုက်ခဲ့သညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ် session ကိုချက်ချင်း FR1 ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်း (30 နာရီကျော်2စစ်ကူ) ကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်နှင့်တည်ငြိမ်ကင်း-ယူပြီးအခြေခံအတည်ပြုထိန်းသိမ်းနည်းသကဲ့သို့ကြွက်စမ်းသပ်ရက်ပေါင်းအကြားလေ့ကျင့်ရေး session တစ်ခုပေးခဲ့သည်။
ကိုကင်းရှာ၏အစောပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများပြီးနောက်, တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်အားဖြည့်များ၏အောက်ပါအချိန်ဇယားကနေတဆင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများတစ်လွှားတိုးပွားလာခဲ့သည်: FR1; FR3; FR5 (FR2: S က); FR10 (FR2: S က); ထို့နောက် FR10 (FR4: S) ကိုရန်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလယ်အလတ်ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားလက်အောက်တွင်, (ကွင်းအတွင်းပေးထားသော) ကိုယူနစ်အချိန်ဇယားပြီးစီးတစ် 1-စက္က CS အလင်းတင်ဆက်မှုအတွက်ရလဒ်; ကိုကင်းတာဟာနှင့် 20-စက္ကအချိန်ကုန်သာခြုံငုံအချိန်ဇယားပြီးစီးအပေါ်သို့ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအဆင့်အကဲဖြတ်အဘို့, ကြွက်ဆာပတုံ့ပြန်နဲ့အေးစက်စစ်ကူအကြားအသင်းအဖွဲ့မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအခြေအနေများအောက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့: အကိုကင်း-ဆက်စပ် CS ၏ဆက်ပြောပါတယ်တင်ပြချက်များ4တုံ့ပြန်မှု (FR4: S) ကိုအပြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်; နှင့်ကိုကင်းလေးခုလီဗာပုံနှိပျ၏ 10th set ကိုပြီးစီးအပေါ်ကိုအပ်ခဲ့သည်။ ကြွက်အကူးအပြောင်းအဆင့်ကိုကင်း-ရှာကြံစမ်းသပ်မှုစတင်မတိုင်မီငါးသင်တန်းများအဘို့ဤအချိန်ဇယားကိုပေါ်ကျန်ရစ်၏။ အဆိုပါ DLS အတွက်α-flupenthixol တာဟာနှင့်အတူအသီးအသီး 15-မိစမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့တိုင်းလေးတက်ကြွစွာလီဗာပုံနှိပျတစ် 1-စက္ကအလင်း CS တင်ဆက်မှုမှုဆက်လက်နှင့်ကိုကင်းသာ [သည့် 15-မိကြားကာလပြီးနောက်စတုတ္ထလီဗာစာနယ်ဇင်းအပေါ်ကိုအပ်ခဲ့သည် ဆိုလိုသည်မှာ FI15 (FR4: S က)] ။ ထို့ကြောင့်အကူးအပြောင်းအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုနောက်တဖန်မတိုင်မီကောက်ယူနှင့်နေ့စဉ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများကထိခိုက်ကြ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ် session ကိုချက်ချင်းတစ်ခု FR10 (FR4: S က) ကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုသင်တန်း (30 နာရီကျော်2စစ်ကူ) နှင့်တည်ငြိမ်သောကိုကင်း-ယူပြီးအခြေခံအတည်ပြုထိန်းသိမ်းနည်းသကဲ့သို့ကြွက်စမ်းသပ်ရက်ပေါင်းအကြားလေ့ကျင့်ရေး session တစ်ခုပေးခဲ့ ။
အကူးအပြောင်းအဆင့်မှာရှာကြံကင်းအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများပြီးစီးပြီးနောက်, တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်များကိုနောက်တဖန်အားဖြည့်များ၏အောက်ပါအချိန်ဇယားကိုဖြတ်ပြီးနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများမှတဆင့်တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်: FR10 (FR6: S က); FR10 (FR10: S က); နှင့်နောက်ဆုံးတွင် FI15 (FR10: S) ကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်း fixed ကြားကာလ (fixed အချိုး) အချိန်ဇယားကိုမှယခင်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြု (23, 28) ။ နောက်ဆုံး FI15 (FR10: S) ကိုစဉ်အတွင်းအချိန်ဇယား, တုံ့ပြန် 10 တုံ့ပြန်မှု (FR10: S) ကိုနောကျကင်း-ဆက်စပ် CS ၏ဆက်ပြောပါတယ်တင်ဆက်မှုများကထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်; ကိုကင်းအသီးအသီး 10-မိ fixed ကြားကာလ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသည့်နောက်ပထမဦးဆုံးအ 15 လီဗာပုံနှိပျပြီးစီးအပေါ်ကိုအပ်ခဲ့သည်။ ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာငါးမရရှိနိုင်ကင်းတာဟာတစ်ကန့်သတ်ရှိ၏။ ကြွက်ကဒီ FI15 (FR10: S က) အရလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်ရေတွင်း-ထူထောင်မတိုင်မီ 15 အစည်းအဝေးများများအတွက်အားဖြည့်များ၏အချိန်ဇယား, ဒါမှမဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်-ဇာတ်စင်, စမ်းသပ်မှုများဟာ DLS အတွက်α-flupenthixol တာဟာများ၏သက်ရောက်မှုကိုထပ်အကဲဖြတ်ခဲ့ပြီးသောအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယား၏ပထမဦးဆုံးကြားကာလ (FI15) မျှကိုကင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း, ကြွက်တက်ကြွစွာမူးယစ်ဆေးရှာကြသည်ရသောအချိန်ကာလဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးကကြွက်တက်ရင်ပြွန်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတွေရှေ့တော်၌, ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ တုံ့ပြန်၏အခြေခံတည်ငြိမ်အခြေခံအဆင့်ဆင့်ကိုသေချာစေရန်တစ်ဦးချင်းစီα-flupenthixol ပြုတ်ရည်စမ်းသပ်မှုများအကြားအခြေအနေများ: ကြွက် FI15 (S FR10) အရသင်တန်း၏အနည်းဆုံးတဦးတည်း session တစ်ခုပေးခဲ့သည်။
အားလုံးသုံးစမ်းသပ်ခြင်းအဆင့်အဘို့, α-flupenthixol (5, 0,5နှင့်ကုသမှုတစ်ခု counterbalanced, လကျတငျ-စတုရန်းနိုင်ရန်အတွက် 10 μg / ပြုတ်ရည်) ၏ intrastriatal တာဟာ (.15 μL / ခြမ်း) hypodermic 28-gauge သံမဏိနှင့်ဖွဲ့ခဲ့ကြ injectors (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ, ရော့, ဗာဂျီးနီးယား) ကလမ်းညွှန် cannulae (ဆိုလိုသည်မှာ, DV-2 မီလီမီတာ) ၏အဆုံးထိုးဆိုဒ်များ5မီလီမီတာ ventral မှလျှော့ချ။ နှစ်နိုင်ငံတာဟာတစ်ပြွတ်စုပ်စက် (ဟားဗတ်ယန္တရား, Holliston, မက်ဆာချူးဆက်) နဲ့ 90 စက္ကကျော်လုပ်ခဲ့ကြသည်နှင့်အ injectors ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်နှင့် obturators အစားထိုးခဲ့ကြသည်ရှေ့တော်၌ 60-စက္ကပျံ့နှံ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးများအကြာတွင်5မိတော့တယ်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့စမ်းသပ်မှု၏အဆုံးမှာတစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ် (ကောက်ယူခဲ့သည်23()1 ဖြည့်စွက်).
5-နည်းလမ်းအကြား-ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်ကြိမ်မြောက်နှင့်အုပ်စု (HI သို့မဟုတ် LI) နဲ့ကှဲလှဲ (ANOVAs) ၏လေ့လာဆန်းစစ်အတူ 2-CSRTT အတွက်အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုထို့နောက် 5-CSRTT ကနေရွေးချယ်ထားသောလေ့ကျင့်ရေးအစီအမံများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်အကြား-ဘာသာရပ်နှင့်အတူအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ။
ရှာကြံကင်းအတွက် DLS dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏န်ထမ်းခေါ်ယူမှုအဖြစ်သုံးလမ်းအဆင့်နှင့်အတူ ANOVA (အစောပိုင်း, အကူးအပြောင်းများနှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်), ဆေးသောက်ရန် (0, 5, 10 နှင့် 15 μg), နှင့်လီဗာ (တက်ကြွစွာနဲ့မလှုပ်မရှား) နဲ့အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည် အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များ။ HI နှင့် LI ကြွက်အကြားရှာကြံကင်းအတွက် DLS dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ differential ကိုစုဆောင်းမှု (စီစဉ်ထားထူးခွားသညျ့နှင့်အတူသုံးလမ်း ANOVA နှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်29) ကြိမ်မြောက် (session တစ်ခု2vs. session တစ်ခု 1 အပေါ်အလေး) နှင့်ဆေးသောက်ရန် (မော်တော်ယာဉ် vs. 10 နှင့် 15 μg / ဘေးထွက်၏ဆေးများအပေါ်အလေး) ကအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များအဖြစ်နှင့်အုပ်စု (HI သို့မဟုတ် LI) နှင့်အတူအကြား-ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်။ တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်များအတွက် HI နှင့် LI ကြွက်အကြားကွာခြားချက်များထို့နောက်အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များအဖြစ်ဆေးသောက်ရန်နှင့်လီဗာနှင့်အတူ ANOVA နှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ သိသာထင်ရှားသော interaction က Tukey ရဲ့ရိုးရိုးသားသားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (HSD) စမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ အဓိပ်ပာယျα = .05 မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
HI အဖြစ်ရွေးချယ်ကြွက် (n = ပု 8-CSRTT အတွက် 5) ကို LI ထက်တိုးလာ ITI ကြာချိန်ပိုမို sensitivity ကိုပြသ (n = 8) ကြွက်ကတော့ LI ကြွက် (နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု HI များအတွက်သုံး LITI စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုးကထောက်ခံအဖြစ်ပုံ 2) Group ၏ (အဓိကသက်ရောက်မှု: F ကို1,14 = 65.20, p <.001, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ: F ကို14,196 = 59.34, p <.001 နှင့် Group မှ×တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြန်အလှန်: F14,196 = 25.44, p <.001) ။ Post-hoc ဆန်းစစ်ချက်အရ ITI ကိုကြာရှည်စွာပြုလုပ်သောကြောင့်အုပ်စုကွဲလွဲမှုများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် (HSD = 14.477)
high-ထကြွလွယ်သောကြွက်အခြေခံ (BL) အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းရှည်လျားသောအပြန်အလှန်ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလ (LITIs) သော်လည်းမစဉ်အတွင်းပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းမပြုမီကိုဖန်ဆင်းအချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့အရေအတွက်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ *တူညီသော LITI ကာလအတွင်းအနိမ့်ထကြွလွယ်သောကြွက်များကနေသိသိသာသာခြားနားချက်။
(ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဦးကို LITI အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုများ၏အဆင့်အဖြစ်တိုင်းတာ) မြင့်မားတဲ့ Impulse အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုအကြားအပြုသဘောဆက်ဆံရေးဟာအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်ရရှိခဲ့သည်လုံးလေးများစုဆောင်းရန်ရည်မှန်းချက် (panel ကိုမဂ္ဂဇင်းသို့တွန်းအဖြစ်တိုင်းတာ) ခြေရာခံခြင်းနှင့်အောင်းနေချိန်ပိုမိုပမာဏနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ လေ့ကျင့်ရေး (τ = .481, စဉ်အတွင်းတွန်းအားပေး panel က p = .010) (ပုံ 3A); ဒီထပ်မံတစ်နောက်ဆက်တွဲကအတည်ပြုခဲ့သည် t panel ကို၏နံပါတ်နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှု (HI နှင့် LI ကြွက်များတွင်တွန်းt14 = 2.36, p = .033) ။ အချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုများ၏အရေအတွက်နှင့်မှန်ကန်သောရုံးတင်စစ်ဆေး (τ = -.211 ပြီးနောက်လုံးလေးများစုဆောင်းဖို့အောင်းနေချိန်အကြားဆက်ဆံရေးမရှိခြင်းနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ် Impulse, သို့သော်အားဖြည့်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့, p = .259) (ပုံ 3B) နှင့် HI နှင့် LI ကြွက်အကြားကဒီအဆုံးစွန်သောအတိုင်းအတာတစ်ခုကွာခြားချက်၏မရှိခြင်း (t14 = 1.14, p = .273) ။ ချက်ချင်း LITI2နှင့်3ရှေ့သင်တန်းအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသော baseline အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် S1 in 1 ဖြည့်စွက်.
အချိန်ကြာမြင့်စွာအချင်းချင်းရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအတွင်းမှာအချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုမဂ္ဂဇင်း panel ကို (ဂိုးခြေရာခံခြင်း) တွန်းနှင့်အတူ (LITI) အစည်းအဝေးများဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် (က) နှင့်အောင်းနေချိန်စစ်ကူ (လှုံ့ဆျောမှု) စုဆောင်းရန် (ခ) သင်တန်းကာလအတွင်း။ high-ထကြွလွယ်သောကြွက်မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်၏အဆင့်မြင့်ပြသပေမယ့်မပိုလှုံ့ဆော်မှုအကျိုးကိုရရှိရန်, နိမ့်ထကြွလွယ်သောကြွက်များထက်။
အားလုံးကြွက်ဟာ DLS အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသ cannulae တည်ရှိခဲ့သော (ပုံ 4()27).
High-ထကြွလွယ်သောအတွက်ဆေးထိုးက်ဘ်ဆိုက်များများ၏ဒေသခံများ၏သိထားကိုယ်စားပြု (က) နှင့်အနိမ့်ထကြွလွယ်သော (ခ) အဆိုပါ anterior dorsolateral striatum ထဲတွင်နေရာလမ်းညွှန် cannulae နှင့်အတူကြွက်များ။ Paxinos နှင့် Watson (ထံမှနျပုံနှိပျ27) Elsevier, မူပိုင်ခွင့် 1998 ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်။
ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopamine-မှီခို DLS ဖြစ်စဉ်များ၏တိုးတက်ရေးပါတီစုဆောင်းမှုကျော်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်နှစ်နိုင်ငံအချင်းချင်းအပြန်အလှန် DLS α-flupenthixol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်တိုးတက်သောတိုးခြင်းဖြင့်ရုပ်ပြအဖြစ်လေ့, cue-controlled ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူနှောင်းပိုင်းတွင်ဇာတ်စင်စမ်းသပ်မှုစောစောထဲကနေလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် : အ 15-မိမူးယစ်ဆေး-အခမဲ့ကင်း-ရှာကြံကြားကာလ (အဆင့်×ဆေးသောက်ရန်×လီဗာအပြန်အလှန်စဉ်အတွင်းတက်ကြွလီဗာပုံနှိပျအပေါ်တာဟာ F6,78 = 3.50, p = .004), ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းရလဒ်တွေကိုအတည်ပြု (15, 23) ။ ထို့ကြောင့် DLS အတွက် dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း (ရှာကြံကင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်စဉ်အတွင်းထိရောက်မှုခဲ့သည်ပုံ 5A) ဆေးသောက်ရန်၏ (အကျိုးသက်ရောက်: F3,45 = 1.03, p = .389 နှင့်လီဗာအပြန်အလှန်ထိုး×: F3,45 = 1.06, p = .375), ဒါကြောင့် (ထိုအကူးအပြောင်းအဆင့်မှာဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာရှာကြံလျှော့ချကင်း-ရသည်ထိုးပုံ 5Bဆေးသောက်ရန်၏) (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု, F3,45 = 3.41, p = .025; ကာလီဗာ, ဆေးသောက်ရန်အပြန်အလှန်× F3,45 = 3.45, p = .024) ။ Post ကို hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ 10- နှင့်α-flupenthixol (HSD = 15) ၏ 26.59-μg / ခြမ်းဆေးများဖို့တွေကပေါ်ကနေခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ cue-controlled ကင်းရှာကြံကောင်းမွန်စွာထူထောင်ခဲ့သည်တဲ့အခါ, နှစ်နိုင်ငံ DLS α-flupenthixol တာဟာ 15-မိမူးယစ်ဆေး-အခမဲ့ကြားကာလ (စဉ်အတွင်းတိုင်းတာကင်း-ရှာကြံတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု ပို. ပင်သိသာကျဆင်းခြင်းအတွက်ရလဒ်ပုံ 5Cဆေးသောက်ရန်၏) (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု: F3,39 = 9.69, p <.001 နှင့်လီဗာ×ဆေးများအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု: F3,39 = 9.01, p <.001) ။ ဒီအဆင့်မှာ, α-flupenthixol အားလုံးဆေးများကိုသိသိသာသာမော်တော်ယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရှာကြံကိုကင်းလျှော့ချ (HSD = 40.30) ။
cue-controlled ကင်းရှာကျော် dopamine-မှီခို dorsolateral striatum ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်ရေးပါတီစုဆောင်းမှု။ အစောပိုင်းမှာပေါင်းစပ် high- နှင့်အနိမ့်ထကြွလွယ်သောကြွက်၏ dorsolateral striatum သို့α-flupenthixol ထိုးနှင့်အတူရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ (ကိုကင်း-အခမဲ့) စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားလီဗာပုံနှိပျ (± 1 SEM) (က), အကူးအပြောင်း (ခ)နှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင် (C) သင်တန်းအဆင့်ဆင့်။ *အဆိုပါ0μgစမ်းသပ်မှုကနေတုံ့ပြန်တက်ကြွလီဗာအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်။ +စမ်းသပ်ပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုထိုးဘို့အတက်ကြွလှုပ်ရှားလီဗာတုံ့ပြန်မှုအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်။ FI, fixed-ကြားကာလ; FR, fixed-အချိုးအစား။
တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရှာကြံကိုကင်းကိုကျော် DLS dopamine ထိန်းချုပ်မှုများ၏တိုးတက်သောစုဆောင်းမှု Impulse status ကိုအားဖြင့် modulated ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် HI နှင့် LI ကြွက်အစောပိုင်းကနေရှာကြံကောင်းမွန်စွာထူထောင်, လေ့, cue-controlled ကင်းဖို့အကူးအပြောင်းကိုကျော် DLS dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ဖို့သူတို့ရဲ့ sensitivity ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်-သင်တန်းများပြသ (ကြိမ်မြောက်×ဆေးသောက်ရန်× Group မှခြားနား: F1,12 = 8.07, p <.05) ။ ထို့ကြောင့် DLS α-flupenthixol ပြုတ်ရည်များသည် HI ရှိတက်ကြွသောလီဗာပုံနှိပ်ခြင်းကိုသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ပုံ 6A) နှင့် LI ကြွက် (ပုံ 6B) ကိုအစောပိုင်းရှာစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း (ဆေးသောက်ရန်သို့မဟုတ်ဆေးသောက်ရန်၏အဓိကသက်ရောက်မှုလီဗာအပြန်အလှန်×: Fs ကို≤ 2.83, p ≥ .063), သူတို့က (ရသည်-ထိုး LI ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းလျော့နည်းသွားပုံ 6Cဆေးသောက်ရန်၏) (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု: F3,21 = 3.89, p = .023 နှင့်ဆေးသောက်ရန်×လီဗာအပြန်အလှန်: F3,21 = 3.86, p = .024) သော်လည်းမ HI ကြွက်များတွင် (ပုံ 6D()Fs <1) စမ်းသပ်မှုရှာကြံအကူးအပြောင်းကာလအတွင်း။ Post-hoc ဆန်းစစ်ချက်များအရ LI ကြွက်များ၏အပြုအမူကိုရှာဖွေသည့်ကိုကင်းသည်α-flupenthixol ၏ 10- နှင့် 15-μg / ဘေးထွက်ဆေးများနှင့်မော်တာများနှင့်မလှုပ်နိုင်သည့်လီဗာပုံနှိပ်ခြင်း (HSD = 40.62) ကိုထိုးသွင်းပြီးနောက်လျော့နည်းသွားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
မြင့်မားသောထကြွလွယ်သောကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကျော် striatum ထိန်းချုပ်မှု dorsolateral မှအကူးအပြောင်းနှောင့်နှေး။ အစောပိုင်းမှာနည်းပါးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောထကြွလွယ်သောကြွက်၏ dorsolateral striatum သို့α-flupenthixol ထိုးနှင့်အတူရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ (ကိုကင်း-အခမဲ့) စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားလီဗာပုံနှိပျ (± 1 SEM) (A, Bအသီးသီး), အကူးအပြောင်း (C, Dအသီးသီး), နှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင် (E, Fသင်တန်းအသီးသီး) အဆင့်။ *အဆိုပါ0μgစမ်းသပ်မှုကနေတုံ့ပြန်တက်ကြွလီဗာအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်။ +စမ်းသပ်ပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုထိုးဘို့အတက်ကြွလှုပ်ရှားလီဗာတုံ့ပြန်မှုအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်။ FI, fixed-ကြားကာလ; FR, fixed-အချိုးအစား။
ကြွက်မူးယစ်ဆေးဆက်စပ် CSS ၏ဆက်ပြောပါတယ်တင်ပြချက်များများ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကင်းရှာလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ရှာကြံစမ်းသပ်မှုများတွင်သည်, FI15 (FR10: S) ကိုစဉ်အတွင်းဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယား၏စင်မြင့်, တုံ့ပြန်ခြင်းထိုး-ရသည်လျော့နည်းသွားခဲ့သည် α-flupenthixol ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာအားဖြင့် HI နှင့် LI နှစ်ဦးစလုံးကြွက်များတွင် DLS သို့။ LI ကြွက်များကို (DLS သို့α-flupenthixol တာဟာ၏ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုဖော်ပြရန်ဆက်လက်ပုံ 6E), DLS dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဤ sensitivity ကိုယခု (HI ကြွက်များတွင်ပေါ်ထွက်လာစဉ်ပုံ 6Fဆေးသောက်ရန်၏) (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု: F3,15 = 5.23, p = .011 နှင့် F3,21 = 4.11, p = .019 အသီးသီး, ဆေးသောက်ရန်အပြန်အလှန်လီဗာ×: F3,15 = 5.20, p = .012 နှင့် F3,21 = 3.59, p အသီးသီး = .031,) ။ ထို့ကြောင့်α-flupenthixol ၏ 10 နှင့် 15 μg / ခြမ်းဆေးများသိသိသာသာတက်ကြွ-လီဗာကိုနှိပ်တက်ကြွလှုပ်ရှားလီဗာတို့အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိတော့ LI နှင့် HI ကြွက်များအတွက် (HSD = 69.58 နှင့် HSD = 55.62 လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်မှဆွေမျိုးကိုတိုက်တွန်းလျှော့ချ အသီးသီး) ။
ရှာကြံ cue-controlled ကိုကင်းကိုကျော် dopamine-မှီခို DLS ထိန်းချုပ်မှုများစုဆောင်းမှု၏အချိန်သင်တန်းအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီ HI နှင့် LI ကြွက်အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း, ထိုအုပ်စုနှစ်စုငါးခု FR1 ဝယ်ယူအစည်းအဝေးများကျော်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစပျိုးရန် propensity အတွက်မကွဲပြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၏ (အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု: F4,56 = 3.124, p = .022 ပေမယ် Group ၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်: F1,14 = 1.606, p = .226, ဒါမှမဟုတ် Group မှ×တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြန်အလှန်: F <1) မဟုတ်သလိုသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးမြှင့်အမူအကျင့်တောင်းဆိုချက်များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်အားဖြည့်၏ဒုတိယအမိန့်အချိန်ဇယား၏တည်ထောင်ခြင်း၏အဆင့်တစ်ခုချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်။ အမှန်မှာ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်အဆင့်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီ FR10 (FR4: S) အစည်းအဝေးငါးခုအတွင်း၌ HI နှင့် LI ကြွက်များအကြားကိုကင်းကိုရှာဖွေသည့်တုံ့ပြန်မှုတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခဲ့ပါ။ Fs <1) သို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းအဆင့်အကဲဖြတ်ခြင်း (Group ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု) မတိုင်မီကျင်းပသော FI15 (FR10: S) အစည်းအဝေးများအတွင်း။ F1,12 = 1.367, p = .265 နှင့် Group မှ×တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြန်အလှန်: F14,168 = 1.167, p : အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆာကင်း-ရှာတုံ့ပြန်မှုအပေါ် CS အပေါ်ဆက်ပြောပါတယ်တင်ပြချက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်တိုးတက်သောတိုး၏ညွှန်ပြသည့်အစည်းအဝေးများကျော်တက်ကြွလီဗာပုံနှိပျအတွက်ခြုံငုံတိုး, (တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်နေသော်လည်း = .305), F14,168 = 1.872, p = .033) ။
နောက်ဆုံးမှာ DLS dopamine-မှီခိုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအလေ့အထအတွက်ရရှိလာတဲ့ကင်း-သွေးဆောင် intrastriatal ဖြစ်စဉ်များ (3, 14, 15, 23, 30, 31) ပို. ပို. (စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းတစ်အရေးပါသောယန္တရားဖြစ်စဉ်းစားနေကြတယ်16) ။ (အနိမ့် ventral striatal D2 /3dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ Impulse ပေမယ့်19) (compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှထိန်းချုပ်ထားခြင်းမှပွောငျးဖို့တစ်ဦးချင်းစီ propensity ၏သော့ချက်အမှတ်အသားအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး18), Impulse နှင့်၎င်း၏နောက်ခံအာရုံကြောအလွှာဟာမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် intrastriatal adapter နဲ့အပြန်အလှန်ထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများမသိရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းကထင်ကြေး (အဆိုအရ28) နှင့် striatal function ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးစွဲ၏ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် (20), မြင့်သော Impulse နှင့်ဆက်စပ်နေသောအနိမ့် dopamine D2 /3၏ရို ventral striatal dopamine receptors (19) ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူကျော် DLS-မှီခိုလေ့ထိန်းချုပ်မှုမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်စုဆောင်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အကြံပြုထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သမာဓိယူဆချက် Impulse ၏အဓိကမှာလဲလျောင်းအဆိုပါချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင်၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြု, corticostriatal-မှီခို, inhibitory ထိန်းချုပ်မှု, မှ add အခါစွဲဖွံ့ဖြိုးအကြံပြုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် intrastriatal ဆိုင်း cue- ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု subserving နှင့်ဆက်စပ်သူတို့နှင့်အတူဆုံ ထိန်းချုပ်ထားသောမူးယစ်-ရှာကြံအလေ့အထ (6, 7, 21, 32, 33).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိချက် Impulse တိုးပွားလာကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပေးခွငျးအားဖွငျ့အဆုံးစွန်သောအမြင် (နှစ်ဦးစလုံးဆေးရှာဖွေနေအလေ့အထများအခြေခံအားပြခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကင်းရှာကြံခဲ့အပြုအမူကျော် dopamine-မှီခို DLS ထိန်းချုပ်မှုများ၏တိုးတက်သောစုဆောင်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့သို့မဟုတ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်မထားဘူးကိုထောကျပံ့3, 6, 15, 16, 23) ။ အစား, အမြင့်ဆုံး Impulse dopamine-မှီခိုဖြစ်စဉ်များ DLS ငှါရှာကြံကင်းထိန်းချုပ်၏တိုးတက်သောအာဏာခွဲဝေပေးမှုကိုမှဦးဆောင် striato-striatal neuroadaptations အတွက်နှောင့်နှေးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်အားဖြင့် (အပြုအမူကျော် dopamine-မှီခို dorsolateral striatal ထိန်းချုပ်မှု Impulse နှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်စုဆောင်းမှုများအကြားအပြန်အလှန်ရှာကြံ compulsive မူးယစ်ရန်နောက်ဆုံးအကူးအပြောင်းအခြေခံကွောငျးဖျောပွသ16) အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, Co-ဖြစ်ပေါ် corticostriatal နှင့် striato-striatal ဖြစ်စဉ်များအပျေါမှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာ corticostriatal-မှီခို inhibitory ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် premorbid ပွောငျးလဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းအားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သှေးထစ်အငေါ့, တင်းကျပ်, maladaptive အလေ့အထများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနေပေါ်ပေါက်ကြောင်းခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ခံရပေလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် HI ကြွက်ထဲမှာ, 15-မိမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံစိန်ခေါ်မှုစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းတက်ကြွလီဗာပုံနှိပျလျှော့ချဖို့ dopamine အဲဒီ receptor ရန်α-flupenthixol ၏နှစ်နိုင်ငံအချင်းချင်းအပြန်အလှန် DLS တာဟာ၏သက်ရောက်မှု၏အချိန်-သင်တန်းအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီရှိ၏။ DLS dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့အစောပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်အဆင့်မှာ cue-controlled ကင်း-ရှာကြံတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် HI နှင့်အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏အခါ, ကသိသိသာသာအကြာတွင်လေ့စမ်းသပ်မှုအဆင့်နှစ်ခုစမ်းသပ်အဆင့်မှာအတက်ကြွလီဗာပုံနှိပျလျော့နည်းသွား LI ကြွက်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်အလုပ်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်တွင်ဤဒေတာ, (23), အားဖြင့် (မသက်ဆိုင်ကြောင်း-ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ထိန်းချုပ်မှု-အားလုံးဘာသာရပ်များနောက်ဆုံးမှာအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံစွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက် DLS dopamine-မှီခိုကင်း-ရှာကြံအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးသရုပ်ပြ3, 8, 15, 23) ။ သို့သော်လေ့ကျင့်ရေး၏အလယ်အလတ်အဆင့်မှာ, ကိုကင်း-ရှာကြံတုံ့ပြန်မှုအထူးသ LI သော်လည်းမ HI ကြွက်များတွင် DLS dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ယုတ်လျော့ခဲ့သည်။
ကိုကင်းရှာကျော်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် DLS ၏ဤနှောင့်နှေးစုဆောင်းမှု (ventral striatum dopamine D2 receptors ၏အနိမ့်ရရှိနိုင်သညျလူသားတို့အတွက်စွဲလမ်း၏သင်တန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း striatal ပြောင်းကုန်ပြီ dorsal ဖို့တိုးတက်သော ventral အခြေခံမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအကြံပြု12, 34) နှင့် nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးချဲ့ကာလအတွင်းမှာ (8, 9, 11, 35) နှင့်ကြွက် (10) ။ ကျနော်တို့နှင့်အခြားသူများ (striatal ပြောင်းကုန်ပြီ dorsal ဤ ventral အဆိုပါ dopamine-မှီခိုတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုတွေအကြောင်း circuitry အပေါ်သို့မူတည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ36, 37) function ကို (dorsolateral striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက်13, 15, 31, 38), ပင်သော်လည်းဒီ circuitry စုဆောင်းနေသည်မထွက်ရယန္တရားများကိုထူထောင်ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်ဆင့် (မျောက်ဝံများအတွက်သရုပ်ပြသည့် dopamine D2 receptors အတွက် dorsal striatum ကျဆင်းခြင်းနှင့်တမန် RNA ဖို့တိုးတက်သောကင်း-သွေးဆောင် ventral (mRNA) ထိုမကြာသေးခင်ကဆန္ဒပြပွဲမှ Added39, 40, 41) နှင့်ကြွက် (10) ကိုလည်း (LI ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ် HI အတွက်နှောင့်နှေးနေသည်10), နျူကလီးယပ်အတွက် D2 mRNA ၏အနိမ့်အခြေခံအဆင့်ဆင့်နေသော်လည်း (ဟောင်း၏အခွံနှင့် dopaminergic အာရုံခံ accumbens10), ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များ ventral striatum အတွက်အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအချင်းချင်းအပြန်အလှန် striatal ကင်း-သွေးဆောင် plasticity ဖြစ်စဉ်များ retards ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည် (ကျွန်တော်အလွန်အမင်းမြင့်မားတဲ့ Impulse အားဖြင့်ခန့်မှန်းခံရဖို့သရုပ်ပြခဲ့ကြကြောင်း, တစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ကင်းဘို့စွဲတူသောအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သောဆန္ဒပြပွဲနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်18), (ပု ventral striatum အတွက်ချို့ယွင်းကင်း-သွေးဆောင် plasticity နှင့်ဆက်စပ်နေသည်42).
striatal D2 dopamine အဲဒီ receptor နှင့် mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်မှတ်သားလျှောက်လျော့နည်းအတွက်ကင်းထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာပေမယ့်လည်းတစ်ဦးလိုက်လျောညီထွေ (စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့အကြံပြု39, 43, 44, 45D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်၏ပုံမှန်ထဲမှာ ventral striatum ရလဒ်များကိုအတွက်အလိုအလျောက်အနိမ့် D2 mRNA နှင့်အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ကိုပြသကြောင်း HI ကြွက်များတွင်), ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (46) ထို Impulse တစ်လျှော့ချမှုနဲ့အပြိုင်။ ဤသည်လေ့လာရေးထို့ကြောင့် HI ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် dorsal striatal စုဆောင်းမှုအတွက်အလားအလာရှိသောနှောင့်နှေးသည့် ventral striatum နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးအစောပိုင်းအပေါ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဆက်စပ် Impulse အတွက်အနိမ့် D2 dopamine receptors ၏ကင်း-သွေးဆောင်ပြန်လည်ကုစားမှစွပ်စွဲခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ အမှန်မှာဒီအယူအဆ LI နှင့် HI ကြွက် (တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကအသေးစား positron ထုတ်လွှတ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်လေ့လာမှုကထောက်ခံနေသည်46) ။ ဤသည်က HI ကြွက်အဘို့, ကိုကင်းဘို့ဆာပလုပ်ရပ်များ, LI ကြွက်များထက်ပိုရှည်ဘို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာ ventral striatum အတွက် dopamine ချို့တဲ့ပြည်နယ်ကဆုံးဖြတ်တဲ့အကျိုးဆက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားဆက်လက်တည်ရှိစေခြင်းငှါ, အကြံပြုကြောင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မှာအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဤသည် HI ကြွက်ဟာ 5-CSRTT အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့အခါမှာအစာအာဟာရကိုဖြန့်ဝေမဂ္ဂဇင်းမှာပိုပြီးအချိန်ဖြုန်း, LI ကြွက်များထက်အစားအစာရည်မှန်းချက်ပိုပြီးအာရုံစိုက်သောလေ့လာရေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့ပြင်အစားအစာများကလှုံ့ဆော်နေတဲ့ Pavlovian conditional ချဉ်းကပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ဂိုးခြေရာခံနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံ (ထက်နှောင့်နှေးဝတာဝန်ပိုမိုထကြွလွယ်သောခဲ့ကြသည်47), Impulse တစ်အတိုင်းအတာကိုလည်း 5-CSRTT အတွက်ရွေးချယ်ထားသည့် HI ကြွက် (ဖော်ပြကြောင်း48) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက် Impulse ဆာနှင့် Pavlovian တာဝန်များကိုအတွက်အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံကိုကာလအတွင်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတစ်ခုကြီးစိုးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကို Impulse နှင့်အလေ့အထများစွဲအထောက်အကူပြုမထွက်ရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများဟောင်းများကအဆုံးစွန်သော၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးပံ့ပိုးအပေါ်သို့မှီခိုမပြပါ။ သို့သော်ထိုသို့သောလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်ရှာယူသူကိုစွဲတစ်ဦးချင်းစီ၌ထင်ရှားလျက်ရှိသောသူတို့ကိုအဖြစ်တရားရှိဖို့ဖြစ်လာကြပြီ maladaptive အလေ့အထများ, ကျော်ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကနေသူ့ဟာသူတစ်ထစ်အငေါ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မရသောအရာ, အလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးရန် propensity dissociate ဖို့အဓိကကျပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ ဒါဟာနောက်ထပ်စွဲမှအားနည်းချက်အလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်ဦးချင်း၏ propensity အတွက်ဒါပေမဲ့အစားမူးယစ်ဆေး-ရှာအလေ့အထနှင့်ဤ maladaptive အလေ့အထများကျော်ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏တင်းကျပ်သဘောသဘာဝ၌အိပျမထားဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအလေ့အထများ၏ဤတရားရှိဖို့ (cortical ဖြစ်စေခြင်းမှရပ်တစေခြင်းငှါ,49) သို့မဟုတ်အားနည်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှု striatal အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ် HI ကြွက်ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်း striatal neuroplasticity များ၏သရုပ်မရှိခြင်းကိုကျော်လွှားရန်အပြုအမူကျော် dorsolateral striatal ထိန်းချုပ်မှုများစုဆောင်းမှုစဉ်အတွင်းစုဆောင်းကြပြီထစ်အငေါ့ neurobiological အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်များ၏ဇွဲအတွက် (10).
ဤလုပ်ငန်းကို (BJE နှင့် JWD မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ (အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက) ထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်G1002231, G0701500) နှင့်အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကများနှင့် Wellcome Trust မှ (အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကထံမှပူးတွဲ core ကိုဆုချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် G1000183; WT 093875 / Z ကို / 10 / Z ကို) ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်အပြုအမူများနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံအင်စတီကျု၏ထောက်ခံမှုပါ။
ကျနော်တို့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက Imperial College-ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က-မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ် (ICCAM) မဟာဗျူဟာမြောက်စွဲပြွတ် (G1000018) အတွင်းထောက်ခံမှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသိအမှတျပွု။ DB အုပ်စုက de Recheche (GDR) 3557 နှင့်တစ်ဦး INSERM AVENIR ထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံနေသည်, ထို ANR "heraddictstress" ဟုအဆိုပါ IREB နှင့် Poitiers တက္ကသိုလ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်အမ်မလီယော်ဒန်မြစ်, ဒါဝိဒ်သည် Theobald နှင့်အလန်လိုင်ယွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာရေးသူအဘယ်သူမျှမပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခများကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Chen က BT, Yau, HJ, Hatch က C. , Kusumoto-Yoshida, ဗြဲ, ချို, SL, Hopf, အက်ဖ်ဒဗလျူနှင့် Bonci, အေ ကိုကင်း-သွေးဆောင် prefrontal cortex hypoactivity ကယ်တင် compulsive ကင်းရှာကာကွယ်ပေးသည်။ သဘာဝ။ 2013; 496: 359-362
Pelloux, Y. , Dilleen, R. , Economidou, ဃ, Theobald, ဃ, နှင့် Everitt, BJ လျှော့ချ forebrain serotonin ဂီယာကြွက်များတွင်ရှာကြံ compulsive ကိုကင်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2012; 37: 2505-2514
Zapata, အေ, Minney, VL နှင့် Shippenberg, TS ကြွက်များတွင်ကြာရှည်အတွေ့အကြုံကိုရှာလေ့ကိုကင်းဖို့ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားရာမှ Shift ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 15457-15463
Jentsch, JD နဲ့တေလာ, JR ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse ။ Psychopharmacology ။ 1999; 146: 373-390
Dickinson, အေ, Wood က, N. နှင့်စမစ်, ဂျေ ကြွက်များကရှာကြံအရက်သေစာ: action သို့မဟုတ်အလေ့အထ ?. QJ Exp Psychol ခ 2002; 55: 331-348
Corbit, LH, Nie, အိပ်ချ်, နှင့် Janak, PH သည် လေ့အရက်ရှာ: အချိန်သင်တန်းနှင့် dorsal striatum ၏ငျဒသေ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 72: 389-395
Everitt, ခနှင့် Robbins, တီ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များမှသည်အလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489
Porrino, LJ, Daunais, JB, စမစ်, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့် Nader, MA ကိုကင်းများ၏တိုးချဲ့သက်ရောက်မှု: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ nonhuman မျောက်မော်ဒယ်လေ့လာစရာများ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 27: 813-820
Porrino, L. ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး limbic, အသင်းအဖွဲ့နှင့် sensorimotor striatal ဒိုမိန်းများအတွက်တိုးတက်သောပါဝင်ပတ်သက်မှုထုတ်လုပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 3554-3562
Besson, အမ်, Pelloux, Y. , Dilleen, R. , Theobald, ဃ, ဘီးလင်း-Rauscent, အေ, Robbins, TW et al ။ မြင့်အနိမ့်ထကြွလွယ်သောကြွက်များတွင် zif268, D2 နှင့် 5-HT2c receptors ၏နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ထုတ်ဖော်ကင်းမော်ဂျူ။ Neuropschopharmacology ။ 2013; 38: 1963-1973
Porrino, အယ်လ်, စမစ်, HR, Nader, MA နှင့် Beveridge, တီဂျေ ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု: စွဲ၏သင်တန်းကျော်တစ်ဦးကရွှေ့ပြောင်းပစ်မှတ်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1593-1600
Vollstadt-Klein, အက်စ်, Wichert, အက်စ်, Rabinstein, ဂျေ, Buhler, အမ်, Klein, O. , Ende, G. အ et al ။ ကနဦး, လေ့နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအရက်သေစာအသုံးပြုမှု striatum dorsal မှ ventral ထံမှ cue အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်း။ 2010; 105: 1741-1749
Xie က C. , နာမည်ကြီးဖုန်းကုမ္မဏီတခုဖြစ်တဲ့, Y. , မာရင်းကျိုသည်အယ်လ်, Zhai, တီ, ရဲ, အီး, ဖူ, အယ်လ် et al ။ abstinent ဘိန်းဖြူ-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်အဘိုးပြတ်ကွန်ရက်များအကြား Imbalanced အလုပ်လုပ်တဲ့ link ကို [ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်ဒီဇင်ဘာလ4၏အွန်လိုင်းထုတ်ဝေ] ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;
Vanderschuren, LJ, Di Ciano, P. နှင့် Everitt, BJ cue-controlled ကင်းရှာထဲမှာ dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 8665-8670
ဘီးလင်း, ဃနှင့် Everitt, BJ ကိုကင်း-ရှာကြံအလေ့အထဟာ dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 432-441
Jonkman, အက်စ်, Pelloux, Y. နှင့် Everitt, BJ အပြစ်ပေးကင်းရှာထဲမှာ dorsolateral နှင့် midlateral striatum ၏အခန်းကဏ္ဍ Differential ။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 4645-4650
American Psychiatric Association ။ diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, 4th ed ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း, ဝါရှင်တန်ဒီစီ; 1994
ဘီးလင်း, ဃ, Apr, အေ, Dalley, ဂျေ, Robbins, တီနှင့် Everitt, B. အမြင့် Impulse compulsive ကင်း-ဆည်းပူးနေမှ switch သည်ခန့်မှန်းထားသည်။ သိပ္ပံ။ 2008; 320: 1352-1355
Dalley, JW, Fryer, တီ, Brichard, အယ်လ်, ရော်ဘင်ဆင်, အီး, Theobald, ဃ, Laane, K. et al ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 1267-1270
Piray, P. , Keramati, MM, Dezfouli, အေ, လူးကပ်, C တို့နှင့် Mokri, အေ ကွန်ပျူတာချဉ်းကပ်: နျူကလိယအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု dopamine receptors စွဲတူသောအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ အာရုံကြော computing ။ 2010; 22: 2334-2368
ဘီးလင်း, ဃ, ဘီးလင်း-Rauscent, အေ, Murray, je နှင့် Everitt, BJ စွဲ: maladaptive မက်လုံးပေးအလေ့အထများကျော်ထိန်းချုပ်ပျက်ကွက်။ Curr Opin Neurobiol ။ 2013; 23: 564-572
Everitt, ခနှင့် Robbins, တီ ကြွက်များနှင့်မျောက်များအတွက်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယား: ထိရောက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူအားဖြည့်များ၏အတိုင်းအတာ။ Psychopharmacology ။ 2000; 153: 17-30
Murray, je, ဘီးလင်း, ဃ, နှင့် Everitt, BJ ကိုကင်းရှာ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကျော် dorsomedial နှင့် dorsolateral striatal ထိန်းချုပ်မှုကိုနှစ်ချက် dissociation ။ Neuropsychopharmacology ။ 2012; 37: 2456-2466
Robbins, တီ အဆိုပါ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်: အပြုအမူဆေးဝါးဗေဒနှင့် functional neurochemistry ။ Psychopharmacology ။ 2002; 163: 362-380
Bari ကအေ, Dalley, ဂျေနှင့် Robbins, တီ ကြွက်များတွင်အမြင်အာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်၏အကဲဖြတ်များအတွက် 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်များ၏လျှောက်လွှာ။ သဘာဝတရားပရိုတိုကော။ 2008; 3: 759-767
McNamara, R. , Dalley, JD, Robbins, TW, Everitt, BJ နှင့်ဘီးလင်း, ဃ ရိုကဲ့သို့သော Impulse ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုလျှော့ချခန့်မှန်းမထားဘူး။ Psychopharmacology ။ 2010; 212: 453-464
Paxinos, G. အများနှင့် Watson, C. Stereotaxic Coordinates အတွက် Rat ဦးနှောက်, 4th ed ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း, San Diego မှ, 1998
Everitt, BJ, ဘီးလင်း, ဃ, Economidou, ဃ, Pelloux, Y. , Dalley, ဂျေနှင့် Robbins, TW compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာအလေ့အထများနှင့်စွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့အားနည်းချက်အခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3125-3135
ခွံရှိ, LV ပုံသေအကျိုးသက်ရောက်မော်ဒယ်များ။ အတွက်: အိပ်ချ် Cooper က, LV Hedges သုတေသန Synthesis ၏ (Eds ။ ) လက်စွဲစာအုပ်။ စယ် Sage ဖောင်ဒေးရှင်းမှ, နယူးယောက်, 1994: 301-321
Ito က R. , Dalley, ဂျေ, Robbins, တီနှင့် Everitt, BJ မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ် cue များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း dorsal striatum အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 6247-6253
Willuhn, ဗြဲ, Burgeno, LM, Everitt, BJ နှင့် Phillips က, PE ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏တိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း striatum အတွက် phasic dopamine အချက်ပြ၏ hierarchical စုဆောင်းမှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2012; 109: 20703-20708
ဘီးလင်း-Rauscent, အေ, Everitt, BJ နှင့်ဘီးလင်း, ဃ Intrastriatal ဆိုင်းအလေ့အထများမှမူးယစ်ရှာကြံလုပ်ရပ်များကနေအကူးအပြောင်းဖျန်ဖြေ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 72: 343-345
Everitt, BJ နှင့် Robbins, TW အဆိုပါ dorsal striatum ဖို့ ventral မှ: မူးယစ်ဆေးစွဲ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ၏အမြင်များ Devolving [ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်ဖေဖော်ဝါရီလ 21 ၏အွန်လိုင်းထုတ်ဝေ] ။ 2013; neuroscience Biobehav ဗျာ 2013;
Volkow, N. , ဝမ်, GJ, Telang, အက်ဖ်, မုဆိုး, JS, Logan, ဂျေ, Childress, AR et al ။ dorsal striatum အတွက်ကိုကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 6583-6588
Letchworth, SR, Nader MA, စမစ်, HR, Friedman, DP နှင့် Porrino, L. မျောက်တွေကိုအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ရလဒ်အဖြစ် dopamine Transporter စည်းနှောင် site ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲများတိုးတက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 2799-2807
Haber, အက်စ်, Fudge, JL နှင့် McFarland, ရော်ဘာ မျောက်ဝံများအတွက် Striatonigrostriatal လမ်းကြောင်းဟာ dorsolateral striatum ဖို့ shell ကိုတစ်ဦးထံမှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလိမ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 2369-2382
Ikemoto, S. Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: နှစ်ဦး projection စနစ်များ ventral midbrain ထံမှနျူကလိယမှ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေး။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2007; 56: 27-78
Keramati, အမ်နှင့် Gutkin, B. ဆားကစ်တွေအကြောင်းမူးယစ်ဆေး-ပြန်ပေးဆွဲ dopamine ကနေပေါ်ထွက်လာစွဲအတွက် Imbalanced ဆုံးဖြတ်ချက်အဆင့်ဆင့်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013; 8: e61489
Volkow, N. , မုဆိုး, ဂျေ, ဝမ်, G. အများနှင့် Hitzemann, R. dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses ။ 1993; 14: 169-177
Moore က, RJ, Vinsant, SL, Nader MA, Porrino, အယ်လ်, နှင့် Friedman, DP မျောက်တွေကိုအတွက် dopamine D2 receptors အပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး effect ။ synapses ။ 1998; 30: 88-96
Nader, အမ်, မော်ဂန်, ဃ, Gage, အိပ်ချ်, Nader, အက်စ်, Calhoun, တီ, Buchheimer, N. et al ။ မျောက်များအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 1050-1056
Kasanetz, အက်ဖ်, Deroche-Gamonet, V. , Berson, N. , Balado, အီး, Lafourcade, အမ်, Manzoni, O. နှင့် Piazza, PV စွဲဖို့အကူးအပြောင်း Synaptic plasticity အတွက်မြဲချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိပ္ပံ။ 2010; 328: 1709-1712
Volkow, ND, မုဆိုး, JS, ဝမ်, GJ နှင့်စတိန်း, RZ dopamine ၏အခန်းက္ပ, မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာတိုကျရိုကျ cortex နဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2002; 78: 610-624
Volkow, ND, မုဆိုး, JS, ဝမ်, GJ, Baler, R. နှင့် Telang, အက်ဖ် မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် imaging dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology ။ 2009; 56: 3-8
Asensio, အက်စ်, ရိုမီယို, MJ, ရိုမီယို, FJ, Wong, C တို့, Alia-Klein, N. , Tomasi, ဃ et al ။ Striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတို့သည် thalamic ဟောကိန်းထုတ်သုံးနှစ်အကြာတွင်ကင်းချိုးဖောက်ဆုချမှ prefrontal တုံ့ပြန်မှု medial ။ synapses ။ 2010; 64: 397-402
Caprioli, ဃ, ဟောင်ကောင်, YT, Sawiak, SJ, Ferrari ပြိုင်ကား, V. , Williamson, DJ သမား, Jupp, ခ et al ။ ကြွက် striatum အတွက် Impulse နှင့် D2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအပေါ်ကိုကင်း pre-ထိတွေ့မှု၏အခြေခံ-မှီခိုသက်ရောက်မှု: အာရုံ-လိုငွေပြမှု hyperactivity syndrome ရောဂါမှဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆက်စပ်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 1460-1471
Flagel, SB, ရော်ဘင်ဆင်, TE, Clark က, JJ, ကလင်တန်, SM, Watson, SJ, Seeman, P. et al ။ စွဲလမ်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: တွေကို-related ဆုချဖို့အမူအကျင့် disinhibition နှင့်တုန့်ပြန်မှမျိုးဗီဇအားနည်းချက်တစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 388-400
ရော်ဘင်ဆင်, ES, လင်းယုန်, DM, Economidou, ဃ, Theobald, DE, Apr, AC, Murphy က ER et al ။ '' ရပ် '' နှိုင်းယှဉ် '' စောင့်ဆိုင်း '၌သီးခြားလိုငွေပြမှု: အ 5-ရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်မြင့်မားတဲ့ Impulse ၏အမူအကျင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2009; 196: 310-316
Jupp, ခ, Caprioli, ဃ, Saigal, N. , ပြန်ပြောင်း, ဗြဲ, Shrestha, အက်စ်, Cumming, P. et al ။ ကြွက်များတွင် Impulse ၏ Dopaminergic နှင့်ဂါဘမြို့သား-ergic အမှတ်အသားများ: ventral striatum နှင့် prefrontal cortex အတွက်ခန္ဓာဗေဒမူပြောင်းခြင်းများအတွက်အထောက်အထား။ EUR J ကို neuroscience ။ 2013; 37: 1519-1528